Sidee si ay u gudbiyaan Files via Samsung Kies
Sida loo isticmaalo Samsung Kies si ay u gudbiyaan, kaabta iyo Soo Celinta
Hadda, aad hesho dhalaalaya Samsung Galaxy S4 , oo aan la sugi karin si ay u gudbiyaan files ka computer leh? Halkan waa hab sahlan oo lacag la'aan ah si ay u maareeyaan, in uu yahay, iyadoo la isticmaalayo Samsung Kies u computer ama Samsung Kies Air. Iyada oo wax kasta oo iyaga ka mid ah, kuu soo gudbin karaan xiriirada, sawiro, video, music iyo ka badan iyo ka aad telefoon Samsung si fudud. In ay qayb ka socda, waxaan jeclaan lahaa inaan si ay u muujiyaan sida loo isticmaalo Samsung Kies (Halkan, waxaan qaadan version Windows sida tusaale.) ama hawada Samsung Kies si ay u gudbiyaan files dhexeeya telefoonka Samsung oo computer.
Qaybta 1. Sida loo wareejiyo files leh Samsung Kies u computer
Qaybta 2. Sidee si ay u gudbiyaan files leh hawada Samsung Kies
Qaybta 3. Alternative in hawada Samsung Kies / Kies
Qaybta 1. Sida loo wareejiyo files via Samsung Kies u computer
1: Import / Dhoofinta Files
2: kaabta iyo Soo Celinta
3: nidaameed Samsung phone
1. Sida loo soo dhoofsadaan iyo dhoofinta files si / ka phone Samsung
Sida laga soo xigtay in aad telefoon model Samsung, waxaad kala soo bixi kartaa Samsung Kies ama Kies 3 iyo rakibi on Your PC. Waxay u ordaan oo ku xidhi telefoonka Samsung in PC via cable USB ama WiFi. Marka si guul ah loo aqoonsan yahay, telefoonka Samsung ayaa la soo bandhigi doonaa interface la files ay kala saaraa on column ka tagay.
Riix Xiriirada , Music , Photos , Videos iyo Podcast si gooni gooni ah, iyo daaqadaha u dhiganta bandhigay guddiga midig. Markaas, waxaad samayn kartaa dajiyaan xiriirada , music, video, sawiro iyo podcast in aad telefoon Samsung, iyo qeybsanaan.
2. Sida loo gurmad dhammaan macluumaadka iyo ka dib soo celin
Backing ilaa macluumaadka taleefanka Samsung waa mid aad loo baahdo. Marka aad telefoon la xado ama la jejebiyey, ama marka aad khasaare xogta weyn, waxaad isticmaali kartaa file u gurmad si aad u hesho xogta ka dib. Samsung Kies taageeray ilaa xiriirada , S Planner, fariimaha, music, video, sawiro, qoraal, abuse wac, doorashada iyo xisaab email si PC si fudud.
Tallaabada 1. Daahfurka Samsung Kies on PC iyo xirmaan telefoonka Samsung in PC via cable USB ah. Your phone Samsung si dhakhso ah loo baari doono.
Tallaabada 2. Tag kaabta / Celinta iyo sax xogta aad rabto in aad gurmad. Waxa kale oo aad sax karaa toos ah dib markii la xidhiidha USB ku dhisan yahay .
Tallaabada 3. Riix kaabta . In nidaamka gurmad oo dhan, waa in aad u hubiso in aad telefoon Samsung waxaa mar walba ku xiran.
Tallaabada 4. Riix kaabta / Celinta > Soo Celinta Data . Sax folder soo xulay si aad u hesho faylka gurmad aad u dhigay. Markaas, dooro alaabta aad doonayay oo guji soo celi .
3. Sida loo hagaagsan Samsung Kies la phone Samsung
Samsung Kies kuu ogolaanaya inaad si hagaagsan xiriir la Google, Outlook, iwm, jadwalka u hagaagsan iyo qoraal la Muuqaalka, iyo music u hagaagsan, video, sawiro, podcast iyo buugaagta la Samsung phone si fudud.
Just guji nidaameed inuu soo galo suuqa kala hagaagsan. Sax shey kasta oo aad rabto in aad u hagaagsan in aad telefoon Samsung. Ka dib markii in, guji nidaameed . Xusuusnow in aan barkinta telefoonka Samsung inta ay socoto.
Qeybta 2: Sidee si ay u gudbiyaan files adigoo isticmaalaya hawada Samsung Kies
Hawada Samsung Kies ku siinayaa awood ay ku maamuli macluumaadka ku saabsan telefoonka Samsung ka Browser. Sidaa daraadeed, waxaad samayn kartaa wareejiyo music , sawiro, xiriirada iyo kalandar u dhexeeya aad telefoon Samsung oo computer effortlessly. Intaa waxaa dheer, waxaad soo diri kartaa oo jawaabin fariimaha qoraalka ah ka computer si toos ah.
Raac talaabooyinka si fudud ku saabsan sida loo isticmaalo.
Tallaabada 1. telefoonka Samsung, shid network WiFi ah. Network WiFi ayaa la mid ah mid ka mid ah loo isticmaalo on your computer waa in.
Tallaabada 2. hawada Open Samsung Kies oo ka jaftaa Start . Ka dib markii ay si guul leh u xiran your computer, waxaa idin ​​tusin URL ah.
Tallaabada 3. Geli URL ee browser. On telefoonka Samsung, tuubada U ogolow in ay oggolaadaan in aad computer si ay u maareeyaan telefoonka Samsung.
Tallaabada 4. Hadda, xogta ku saabsan telefoonka Samsung waxaa lagu soo bandhigaa bogga. Sax category kasta oo geliyaan / download / tirtirto waxyaabaha ku jira.
Qaybta 3. A Alternative awood leh in ay hawada Samsung Kies / Kies
Hel ka daaleen Samsung Kies ama hawada Kies, iyo raadiyo ee badiilka ah? Waxaa kale oo badan tahay, ka mid ah oo Wondershare MobileGo taagan. Waxaa oo dhan waa wada-in-mid Tababaraha Android, waxaa sameyn kara waxa Samsung Kies dhaco gaaban.
Hel more kale oo hawada Samsung Kies / Kies halkan >>
Feature 1. kaabta iyo Soo Celinta 1 click. Iyadoo MobileGo, kula soo xiriiro, fariimaha, jadwalka taariikhda, abuse wac gurmad iyo barnaamijyadooda ka phone Samsung in PC / Mac iyo soo celin karaa 1 click. (The version daaqadaha sidoo kale gurmad iyo soo celinta music, video iyo sawiro.)
Feature 2. barnaamijyadooda Transfer, warbaahinta si / ka Samsung. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad si fudud u jiidi oo hoos u sawiro, xiriirada, barnaamijyadooda, video, music iyo ka badan oo u dhexeeya phone Samsung iyo PC. The version Windows xitaa waxay ka caawisaa si loogu badalo music iyo video.
Feature 3. nidaameed xiriir la Outlook, Windows Live Mail, iwm ayaa version Windows awood aad si hagaagsan xiriir la Outlook Express, Windows Live Mail, Windows Cinwaanka Kitaabka iyo Muuqaalka 2003/2007/2010/2013 aan ku xirid ah.
Habkaani 4. Transfer music ka Lugood in phone Samsung. MobileGo gelineya inaad si ay u gudbiyaan playlists in Lugood Library in aad telefoon Samsung ku haboon. Ka sokow, aad awoodaan inay u dhoofiyaan playlists ka phone Samsung ah in Lugood Library aad.
Sida loo soo dajiyo, uninstall, cusboonaysiiso Kies Samsung?
Sida loo kaabta Samsung Galaxy S4 1 Click?
Sida loo kaabta & Soo Celinta Samsung Galaxy S3?
Sida loo kaabta Samsung Galaxy Note 3?
Sida loo kaabta Samsung Galaxy Note?
Sida loo Demi Xogta laga Samsung si iPhone?
Sida loo Copy Faylal ay ka Nokia in Samsung?
Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka Lumia in Samsung
> Resource > Android > Sida loo Isticmaalo Samsung Kies si ay u gudbiyaan Files